200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Muxuu waqti dheer u qaatay shirka madaxda ee Muqdisho? | Shabakada Warbaahinta Times
Nov 3, 2017 - jawaab
Kullanka waxaa diiradda lagu saarayaa qodobo dhowr ah, mana jiro go’aan ka soo baxay ama wax lagu heshiiyay illaa iyo hadda.
“Waxay u baahnayd in hurmar laga sameeyo arrinta amniga. Markii wax lagu heshiiyo waaa in la qaado tallaabooyiin muuqda,” ayuu yiri Guleed oo la hadlay BBC-da.
“Amniga waxaa hortaagan oo dib u dhac ku keenaya jawiga guud ee siyaasadeed ee cakiran oo saameyn ku leh horumaradii la sameyn lahaa,” ayuu hadalkiisa ku daray Guleed Salax.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qaadatay go’aan dhexdhexaad ah oo ku aadan khilaafka u dhexeeya dalalka Khaliijka. Wadammo uu hoggaaminayo Sacuudiga ayaa go’doomiyay dalka Qadar.
Qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa dowladda dhexe ugu baaqay in ay taageerto go’aanka Sacuudiga iyo dalka Isutagga Imaaraadka Carabta, ayna xayiraad saarto Qadar.
Guleed Salax ayaa sheegay in “jawigaas oo ka horeeyay shirka uu yahay mid aan saamaxayn in si fudud heshiis loo gaaro.”
Machadka SIDRA, warbixin soo saaray ayuu ku sheegay in boqolkiiba 61 shacabka Soomaaliya ay taageersan yihiin go’aanka dhexdhexaadka ah ee dowladda dhexe qaadatay.
Markii Madaxweynihii hore ee Hirshabelle xilka laga qaaday iyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay Galmudug, madxada maamullada waxay isugu tageen Kismayo waxayna cambaareeyeen dowladda Soomaaliya iyo “faragelinta ay ku hayso maamullada”.
“Kala shakiga badan iyo xiriirka oo xumaaday, ee soo jiray mudooyiinkii ugu dambeeyay, waxay keenayaan in is afgarad degdeg ah la gaari waayo,” ayuu yiri Guleed.
“Waxay ila tahay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada la yimaadaan hannaan wada shaqeyn oo yarayn kara khilaafka markasta soo kala dhexgala labada dhinac,” ayuu ku taliyay madaxa SIDRA.
“Maamul goboleedyada waxay ka cabanayaan in wadatashiyo aan lagala yeelan isbedello lagu sameeyay dastuurka,” ayuu yiri Guleed Salax oo siyaasadda Soomaaliya ka faallooda.
Dowladda dhexe ayaa horey loogu eedeeyay faragelin ku hayso maamullada, “ayna sabab u ahayd xil ka qaadista madaxda qaar,” sida ay ku doodeen hoggaamiyayaasha maamullada.
“Degdegga golaha Kismaayo lagu dhisay iyo waxa ay qabanayaan ee la sheegay, waxaa ka asalsan kala fogaanshaha dowladda federaalka iyo maamullada. Marka waa muhiim in la gaaro xalka madmadowga markastaa soo kala dhexgalo” ayuu yiri Guleed Salax.
Sida uu sheegay Guleed, Arrintan waxay ka mid tahay qodobada u baahan in heshiis dhab ah lagaga gaaro shirka Muqdisho ka socda oo weli uusan ka soo bixin go’aan dhab ah oo lagu heshiiyay.
“Maamul goboleedyada waxay marwalba ka cabanayeen in dowladda dhexe ay isku koobto deeqaha caalamka laga helo,” ayuu yiri madaxa machadka cilmi baaridda siyaasadda ee SIDRA, Guleed Salax.
Dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa la dhisay siddeed bilood ka hor, waxayna wajeheysaa caqabo dhanka “amniga iyo siyaasadda ah”.
Sida wararka ay sheegayaan, maanta ayaa la filayaa in go’aan ugu dambeeya uu ka soo baxo kullanka Muqdisho uga socdo hoggaamiyayaasha maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka.